Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona - LEXILOGOS
1. Izay olona voapanga dia heverina ho mbola tsy manan-tsiny mandra- pivoakan'izay didy manameloka azy. Izany didy izany dia havoakan'ny tribonaly nitsara am-pahibemaso ka nanome ny antoka rehetra fa afaka niaro tena ilay voampanga.
2. Tsy misy olona azo helohina noho ny asa na fanadinoana raha toa izany ka natao tamin'ny fotoana izay tsy mbola ahafantarana fa mahadiso ilay fihetsika na ilay asa araka ny lalna nasionaly na iraisam-pirenena. Torak'izany koa, tsy misy azo saziana mihoatra noho izay sazy voalaza fa ampiharina ao amin'ny tany misy azy tamin'ny fotoana nanaovany ilay fahadisoana.
1. Zon'ny olona rehetra ny mivezivezy an-kalalahana ary mifidy izay toerana tiany hipetrahana ao anatin'ny fanjakana iray.
1. Raha misy fanenjehana azy, dia zon'olon-drehetra ny mitady fialokalofana any an-kafa;
2. Io zo io kosa dia tsy azo hampiharina amin'ny raharahan-keloka tsotra na amin'ireo asa sy fihetsika mifanohitra amin'ny foto- pisainana sy zava-kendren'ny Firenena Mikambana.
2. Tsy misy olona azo verezin-jo tsy amin'ny rariny na rarna tsy hiova zom-pirenena.
3. Ny fianankaviana no fototra ara-boajanahary iorenan'ny fiaraha- monina, ka manan-jo hoarovan'ny fiaraha-monina sy ny fanjakana.
1. Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fananana manokana na itambarana.
2. Tsy misy olona azo alaina amin-kery ny fananany.
Malalaka amin'ny heviny sy amin'ny fivavahana hinoany ary manan-jo hiheno ny feon'ny fieritreretany ny olon-drehetra. Io zo io dia mamela azy malalaka hiova fivavahana na firehana samihafa. Ny olon-drehetra koa dia manan-jo haneho izany finoany na firehany izany am-pahabemaso na ho an'olom-bitsy ; amin'ny alalan'ny fampianarana na fanaovana fomba…
3. Ny sitrapon'ny vahoaka no fototry ny fahefan'ny fitondram- panjakana Amin'ny fifidianana no tokony hanehoany izany sitrapony izany, ka tokony ho marina sy hisy ara-potoana izany fifidianana izany. Handraisan'ny daholobe anjara ary miafina ny latsa-bato na ara-pomba mitovitovy amin'izany ka miantoka ny fahalalahan'ny fifidianana.
1. Manan-jo hanana asa ny olon-drehetra, hifidy izay asa tiany, ka amim-pitoviana sy ara-drariny no hanaovana izany. Manan-jo ho arovana amin'ny tsy fananan'asa koa izy.
1. Manan-jo hanana fari-piainana antonony sy ampy ny tsirairay mba hiantoka ny fahasalamany, sy izay rehetra mahasoa azy sy ny ankohonany : sakafo, fitafiana, fonenana, fitsaboana ary kojakoja sosialy ilaina rehetra. Manan-jo ihany koa hahazo fiahiana ara-tsosialy ny tsirairay raha sendra ny tsy fananan'asa, aretina, takaitra, fahanterana na antony hafa tsy niniany ka tsy ahafahany mivelona.
1. Manan-jo hahazo fanabeazana ny olon-drehetra. Tokony ho maimaim- poana izany, farafaharatsiny any amin'ny fampianarana fototra. Tsy maintsy atao ny fampianarana ambaratonga voalohany. Ny fampianarana teknika sy fanofanana ara-asa kosa dia tokony ho azon'ny rehetra hidirana araka ny fahaizan'ny tsirairay.
3. Ny ray aman-dreny ihany no voalohany manan-jo hifidy izay karazam- panabeazana omena ny zanany.
2. Mahazo mankafy ny zava-kanto sy mandray anjara amin'ny fampivelarana ny siansa sy ireo tombo-tsoa aterak'izany. Tokony ho arovana ny zon'ny mpamorona eo amin'ny lafiny rehetra : voka-pikarohana siantifika, haisoratra, zava-kanto…
2. Ny lalna ihany no mametra ny fizakan'ny tsirairay ny zony sy ny fahafahany. Izany dia mba hitandroana ny fanajana ny zon'ny hafa, ny lalna ara-moraly, ny filaminam-bahoaka ary ny mahasoa ny olon- drehetra ao anatina fiaraha-monina demokratika.